"Gewurztraminer" (iwayini): incazelo, umakhi, ukubuyekezwa
Umhlaba ukhiqiza ezihlukahlukene enkulu utshwala, ezinhle futhi alilihle. Wonke umuntu ekhetha isiphuzo ukunambitha. Ungazama futhi akhohlwe, kodwa "Gewurztraminer" - iwayini akunakwenzeka ukuba wazi. ukunambitheka laso eliyingqayizivele, iphunga okubabayo phakade zahlala enkumbulweni yami abaphoqelelwa ngenkani ukuba baphindele Kulokhu kaningi.
Iwayini iphathelene utshwala, it is etholakala juice kwamagilebhisi nge ukuvutshelwa ngokugcwele noma kancane oludakayo. Le nqubo yaziwa iminyaka 7000 BC. Ukuba khona iwayini onkulunkulu Osiris kusukela abaseGibithe, amaGreki Dionysus, Bacchus lase libhujiswa ngemaRoma libonisa okuyinto oluthatha indawo ebalulekile ekuphileni kwansuku zonke isiphuzo.
Lapho iqala ukwaziwa, akwaziwa, kusolakala eMesophothamiya, Palestine (Israyeli) noma Georgia. AbaseGibhithe bahileleke iwayini kanye ukusabalala isiphuzo lonke iMedithera, amaRoma - ku, bonke emazweni ayenqotshiwe. BaseYurophu alethwe zwekazi American, eNingizimu Afrika, New Zealand, e-Australia.
iwayini elimnandi Ezinhle, ukunambitheka emangalisayo futhi ukujula nge lutho ukunambitheka efanayo, ekhiqizwa eFrance. "Gewurztraminer" - iwayini (isithombe embhalweni) elimelela wobuciko winemakers Alsatian. Lokhu isiphuzo ine ukunambitheka ongenakulibaleka, ngamanothi okubabayo futhi elimnandi izithelo enamandla egcwele.
"Gewurztraminer" - iwayini, incazelo edinga tiphawulo kuphela limi kahle kakhulu. Muhle umuntu inamandla futhi ukunambitheka zahlukahlukene kakhulu, ungakwazi 'ukuzwa':
iqabunga black currant;
Ungazizwa futhi izithelo ezingavamile: passion fruit, umango, uphayinaphu, Lychee. Yethula nezinongo: clove, ginger, Mint.
Esiwaphuzayo umbala ocebile ophuzi nokukhanya okubekwe obala segolide, ihlinzeka isikhumba amajikijolo ngokubomvu. Oyindilinga, ukunambitheka enamandla egcwele isakhiwo esiqinile kuhlangene i freshness nenhle. "Gewurztraminer" ilinde asebekhulile imiphongolo, ke udakwe abasha, ifinyelela isiqongo sayo ngonyaka wesithathu.
Iwayini ngamagilebhisi "Gewurztraminer" labelwe phakathi nezinye izinhlobo zophuzo efanayo ukunambitheka ehlukile kanti iphunga ezikhexisayo. He is liyabonakala kunazo zonke iwayini Alsatian. Ngemva kokuya kanye, ngeke kube kudidaniswe yimuphi omunye.
emakhulwini amaningana eminyaka adlule, esifundeni Italy Alto Adige wayedume yamagilebhisi yayo sesitshalo "Traminer". legionaries Roman efana ezihlukahlukene zendawo, bamlethela eRoma. Phuza lokhu yamagilebhisi omamukele kuKhesari yena.
AmaRoma ayesebenzisa iwayini zonke izinsuku, emazweni ayenqotshiwe zilimo amagilebhisi, kuhlanganise "Traminer". Ngakho wabonakala eFrance ngo-Alsace. Ngokuhamba kwesikhathi, ngenxa ukunambitheka kakhulu kanye amakha njalo, wathola Isiqalo "gevyurts" - okubabayo (German). Akukhona nje igama kodwa futhi emthunzini amajikijolo. Esikhunjeni Esiphaphathekile oluhlaza ikhasi umbala ushintshile ukuze ube segolide ophuzi noma Pinkish ansundu. Kuyinto lokhu ezihlukahlukene futhi ukunika kakhulu ezimhlophe iwayini elimnandi.
Alsace iwayini zikhishwa chilled, ngokuvamile 0 kuya ku-8 C "Gewurztraminer" - iwayini ukugeleza lokushisa okuyinto ziyahlukahluka kuye ngokuthi asidi yayo. Kakhulu isiphuzo omuncu is selehlile 12 0 C, ezingeni lokushisa ongaphakeme kuyehla asidi kuphela-8 0 C. Ngemva bottling iwayini yi ingilazi kunconywa Ningamuki etafuleni wafaka emuva ku esiqandisini ukugcina isiphuzo esishisayo.
Glass ukugeleza ubizwa ngokuthi "Sauvignon Blanc", igama layo olungekho emthethweni "ukubona off the Year ubudala okusha." It has an ijamo side of a Tulip. iwayini elimnandi baphuza kuphela kusuka kulawa izibuko, bamandla kakhulu phakathi kanzulu ngokugcwele isiphuzo isixha ngokwengxenye layo elingenhla. Ngokwe nemithetho yokuziphatha isitsha zizogcwaliswa 1/3. Kumane "iwayini echibini" - the iningi ingxenye yayo okubanzi, bathole amagremu 100 isiphuzo.
"Gewurztraminer" - iwayini (umthengi Izibuyekezo kule ngazwilinye), okuyinto ephelele njengenhlangano isiphuzo esigeza inhliziyo. Budinga akhethe ngokucophelela pair, thola othile osebenzelana ujabule, ngokugcina ukuthula nokuqonda phakathi ukunambitheka iziphuzo kanye izitsha.
ukuxuba ezithakazelisayo Culinary ukunikela ukudla okuhlukahlukene kazwelonke:
inhlanzi Russian ngaphansi ijazi noboya uzothola amanothi licace, futhi inhlanganisela izinhlanzi anosawoti nemifino ukumangala amnandi nge shades entsha;
IsiShayina kwasolwandle cuisine kahle kuvumelana iwayini, ekucindezelekeni mbhangqwana futhi ukunambitheka Okusizayo okwenza;
ukudla Mexican okubabayo uzothola umlingani Uyakufanelekela, ku isiphuzo yayo yangemuva elahlekile, futhi ngeke inselelo, okwenezela ukunambitheka eqinile yephunga layo elinamandla.
"Gewurztraminer" - iwayini behlezi kahle izithelo, amakhekhe, dessert nesinamoni, ginger ujamu. Lingasebenza inyama noma inyama yenkukhu kanye amawolintshi, uphayinaphu. umdlalo Excellent kuyoba ngokuvumelana ngaphansi sauce cranberry, pilaf nge izithelo ezomisiwe. izitsha ezingavamile, ushizi ubudala, foie Gras kanye nama-dessert - a saphezulu izithelo iwayini umthunzi efanelekayo noma iziphi iziphakamiso. Amazing ikhono "Gewurztraminer" ukugcizelela ukunambitheka kokudla futhi ukwenza kukhanga kakhulu.
Emhlabeni wonke obonwa ezweni elilodwa kuphela, oveza yangempela, "kwesokudla", "Gewurztraminer" - France. Lapha ungathola iwayini ezomile kanye dessert. Kukhona ezishibhile "abantu" futhi ayethanda izinhlobo eziyigugu. Ezinye izici iwayini kwamanye amazwe:
Ngokuthi "mfowethu" Italian zingaphansi lokukhanya isixha libizwa. Lighter, esidi ayinakho iphunga ekhululekile.
iwayini German okumnandi okwedlula le Alsatian, kancane omuncu, kodwa licace kakhulu inguqulo Italian. It has a iphunga ocebile ezimibalabala futhi elinuka nge amathoni ezicashile kwezilwane.
Yellow "Gelber Traner" futhi abomvu "Roter Traminer" - okubizwa ngokuthi "Gewurztraminer" e-Austria. It has a ukunambitheka amnandi kakhulu.
Ezweni elithile laseMelika, akukho izimo ezinjalo ekahle ukukhiqizwa lokhu brand. Ngaphezu kwalokho, winemakers bendawo abathanda experiment akenezeli zifana original.
sezulu Spanish lishisa kakhulu imivini ngesikhathi amajikijolo yokuvuthwa ngokushesha alahlekelwe umoya layo eliyingqayizivele. Catalans akuzona sorry kakhulu, futhi "ewela" iwayini nge amakinati. Kule "Gewurztraminer" Usakhuluma, yebo, kude.
Izinga kuyinto iwayini elimhlophe "Gewürztraminer" (France). Ngezinye kuye futhi waqondisa iwayini-abenzi emhlabeni wonke wahlanganyela emsebenzini wokukhiqiza isiphuzo esihle futhi emangalisayo. Imibandela futhi ezicashile iwayini umvumele ukuba ningangenisi touch of ukunambitheka zendawo izici ngamunye endaweni ethize.
Iwayini 'Gewürztraminer "(France, Alsace) ihlukaniswa ngokweminyaka degree of ubumnandi:
Vandazh wokungasigcini (Vendanges Tardives - VT) noma iqoqo ngasekupheleni Yenziwe ngasekupheleni sokuvuna amagilebhisi.
Selekson de Gran Noble (Ukukhethwa de Izinhlamvu Nobles - SGN) - enziwe kuphela amajikijolo ezivuthiwe oluthandwa ezihloniphekayo, bona kucatshangwa ukuthi emnene.
Quintessence de Izinhlamvu Nobles - QGN, iwayini ezingavamile, ku nemingcele eziyisisekelo njengabakhulu kunani amamaki elicwengiweyo SGN.
"Gewurztraminer" - yamagilebhisi ezihlukahlukene (kuhunyushwa - "amagilebhisi okubabayo" Tramin "), okuyinto Clone of" Rose Traminer "Igama layo esemthethweni ye amagilebhisi Akuzange kwaphela isikhathi eside kangaka edlule, ngo-1973, grade uMoody, izimfuno sakhe phezulu enhlabathini bese microclimate .. .
Ayikwazi ukuma bancishwa inhlabathi nesomiso. Eliphezulu ezikhulayo ivundile, ocebile amaminerali namathempeli ngokhonkolo namatshe emhlabathini. Alsace French idume nenhlabathi layo eliyingqayizivele nge high okuqukethwe namathempeli ngokhonkolo namatshe. 20% endaweni Imininingwane elalihlala izivini grade "Gewürztraminer" esifundazweni.
Inani elihle kunawo kubhekwa sezulu cool. Esimweni sezulu esishisayo, ushukela amajikijolo ukuthola ngokushesha ulahlekelwe asidi zabo newayini livela i umthunzi engathandeki ebabayo. izimvula okweqile kuholela ekulahlekelweni ukunambitheka. zom Ngasekuqaleni esimweni frost ezingalindelekile kuholela kuzamazamisa izimbali. Izinhlobonhlobo akahlukile isivuno sasiyoba sikhulu, kodwa izinga uyajabula uma unakekelwa kahle.
It is kutshalwa ikakhulukazi eFrance, eJalimane, e-Slovakia, Bulgaria, Croatia, enyakatho ye-Italy. Kukhona izivini nale ezihlukahlukene e-United States, e-Australia, eNew Zealand, Israyeli futhi eNingizimu Afrika. ISoviet Union yakuqala ezihlukahlukene ezifana kungatholakala e-Russia, e-Ukraine, eMoldova.
Zonke iwayini ekhona ihlukaniswa ngokweminyaka izici ezilandelayo esemqoka:
uhlobo izinto zokusetshenziswa;
okuqukethwe carbon dioxide;
ushukela kanye notshwala.
"Gewurztraminer" - iwayini ngezigaba lingachazwa ngokuthi:
abasha (ngaphansi 3 iminyaka);
ukukhiqizwa Iwayini ayikashintshi izinkulungwane zeminyaka. Yiqiniso, ubuchwepheshe kunakuqala, kodwa ngokuyisisekelo akukatjhuguluki:
eziphilayo elilodwa (imvubelo) is ibe juice kwamagilebhisi eziqukethwe ushukela ube utshwala.
ukuvutshelwa isikhathi inquma ukujula ukujula ukunambitheka isiphuzo luhlaza. iwayini elibomvu zululeka kancane esingaphansi kwesonto, babe izinhlobo ezimhlophe, le nqubo ingathatha amaviki ambalwa.
nokuvuthwa Okubalulekile futhi isitoreji, isikhathi kuxhomeke ohlotsheni isiphuzo.
Ongoti baze kanjani ukusheshisa noma ukubambezela yonke inqubo ukuvutshelwa nangokunquma isiphi isihlahla kangcono yokugcina yesikhathi eside lesi siphuzo, baye bafunda ukuwela izinhlobo ezehlukene amagilebhisi. Naphezu kwazo zonke lezo yizinto zesimanje ubuchwepheshe ukukhiqizwa iwayini ayiguquki. Vele wenze futhi "Gewürztraminer".
Kukhona amaqiniso ambalwa ezithakazelisayo ezihlobene winemaking:
wayini elalenziwe kuwo wonke amazwekazi ngaphandle Antarctica;
kuqala ucwaningo centre anikezelwe ekutadisheni isiphuzo, uvele France;
ukunambitha, ukuhogela komkhiqizo akuxhomekile nje kuphela esimweni indaba, kodwa futhi ku isikhathi sokuvuna, izimo sezulu esimweni ngasinye, ukuvutshelwa lokushisa, ukuchayeka isikhathi, izinhlobonhlobo emthini imiphongolo zenziwa;
ibhodlela egcinwe iwayini corks phansi noma ezinsikeni zawo ngakho ukhokho wamanziswa futhi asivumeli emoyeni ngaphakathi;
winemakers professional iwayini bevalela e izinhlobo ezithile amabhodlela, baphuze grade ezifanele;
ukunambitheka incike lokushisa supply: iwayini ukukhanya zidinga Ukupholisa ngaphezulu degrees 7-10, okubomvu kuvunyelwe 18-20 0;
ngokungenaphutha Alsace ngo-1955 okokuqala wethulwa welithi "iwayini komgwaqo", ngokuhlanganisa ezokuvakasha, amahhotela, iwayini-ngokunambitha kanye nokudla okuhle.
Vodka "Beluga": incazelo kanye izici. Izibuyekezo
"Ama-Hennessy" - inombolo brandy 1 emhlabeni
Okusajingijolo iwayini: iresiphi enongiwe utshwala
Kanjani Chacha ekhaya: igxathu negxathu Umhlahlandlela
Tincture obomvu currant - siphuzo esehl 'esiphundu futhi enongiwe
Ukuphepha ingilazi noma ifilimu - kungcono ukuvikela isihenqo ifoni yakho?
Amathiphu izingane: kanjani ukukholisa abazali ukuthola inja
Amazinga Ukucubungula amabhuku ezimali kanye ukuthola ukukhwabanisa iphutha
Nizhny Novgorod esifundeni Population: Ukwakheka, ubuningi
Indlela ngokushesha ukudambisa yocingo: amathiphu umhlabeleli namasu
Indlela ukufaka Windows on a Mac ngokusebenzisa izinhlelo ezehlukene